Yintoni i-Pip kwi-Forex-Yazi yonke malunga nePips ekurhwebeni kwe-Forex
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Yintoni iPip kwi Forex?
Kule nqaku, siza kuphendula umbuzo wokuba yintoni ipayipi kwimakethi ye-forex kunye nokuba le ndlela isetyenziswe njani kuyo Forex yorhwebo. Ke, funda nje eli nqaku ukufumana ukuba zeziphi iipips kwi-forex.
Yintoni iipips kurhwebo lweMali ka-Forex?
Iipips lutshintsho oluncinci lokuhamba kwamaxabiso. Ngokulula, le iyunithi esemgangathweni yokulinganisa ukuba litshintshe kangakanani inqanaba lotshintsho kwixabiso.
Ekuqaleni, umbhobho ubonise olona tshintsho luphantsi luhamba ngalo malunga nexabiso le-Forex. Nangona, ngokuqala kweendlela ezichanekileyo zamaxabiso, le nkcazo yokuqala ayisasebenzi. Ngokwesiko, amaxabiso e-Forex acatshulwe kwiindawo ezine zokugqibela. Ekuqaleni, olona tshintsho luphantsi lwamaxabiso ngenani lesine lendawo lalibizwa ngokuba yi-pip.
Ihlala ilinani elifikelelekayo kubo bonke abarhwebi kwaye Maqonga, eyenza isebenziseke kakhulu njengenyathelo elivumela abathengisi ukuba banxibelelane ngaphandle kokuphazamiseka. Ngaphandle kwenkcazo enjalo, kukho umngcipheko wokuthelekisa okungachanekanga xa kuziwa kumagama ngokubanzi anjengeengongoma okanye imikhaza.
Yimalini ipip enye kwi-Forex?
Abarhwebi abaninzi babuza lo mbuzo ulandelayo:
Yimalini ipayipi enye kunye nendlela yokubala ngokuchanekileyo?
Uninzi izibini lwangoku, enye ipayipi yintshukumo yendawo yesine yokugqibela. Okona kubalulekayo kuphela zizibini ze-forex ezihambelana neJen yaseJapan. Kwizibini zeJPY, enye ipayipi yintshukumo kwindawo yesibini yedesimali.
Le theyibhile ilandelayo ibonisa amaxabiso e-Forex kwezinye iithala zemali esiqhelekileyo ukuqonda ukuba yintoni kwi-Forex ilingana:
Ixabiso lemibhobho ye-Forex (i-1 eninzi)
Thelekisa ixabiso lepay yeeperesi ze-forex
Ngokutshintsha kwepayipu enye kwisikhundla sakho, unokuphendula umbuzo wokuba yimalini iindleko zombhobho. Masithi ufuna ukuthengisa i-EUR / i-USD, kwaye uthatha isigqibo sokuthenga enye. Inye yexabiso ixabisa i-100,000 ye-euro. Ipayipi enye ngu-0.0001 ye-EUR / USD.
Ke, indleko yepayipi enye malunga ne-100,000 x 0.0001 = Iidola ezili-10 zaseMelika.
Masithi uthenga i-EUR / i-USD nge-1.12250 kwaye emva koko uvale isikhundla sakho nge-1.12260. Umahluko phakathi kwezi zimbini:
Ngamanye amagama, umahluko yipayipi enye. Ke, uya kwenza i-10 yedola.
Yintoni ikhontrakthi ye-Forex?
Masithi uvule isikhundla sakho se-EUR / USD nge-1.11550. Kuthetha ukuba uthenge ikhontrakthi enye. Le ndleko yokuthenga kwikontrakthi enye iya kuba yi-100,000 yeedola. Uyathengisa Iidola zokuthenga ii-Euro. Ixabiso le Idola oyithengisayo ibonakaliswa ngokwendalo ngokwenqanaba lokutshintsha.
Uvale isikhundla sakho ngokuthengisa ikhontrakthi enye nge-1.11600. Kucacile ukuba uthengisa ii-Euro kwaye uthenge iiDollars.
Oku kuthetha ukuba ekuqaleni kuthengiswe i- $ 111,550 kwaye ekugqibeleni ifumene i- $ 111,560 ngenzuzo ze- $ 10. Ukusuka koku, sibona ukuba intshukumo enye yombhobho ikwenzele i-10 yeedola.
Eli xabiso leepips lihambelana nawo onke amabala e-forex acatshulwe ukuya kwiindawo ezine zokugqibela.
Kuthekani ngezimali ezingakhankanywanga ukuya kwiindawo ezine zokugqibela?
Eyona mali iphawuleka kakhulu yiJen yaseJapan. Izibini zemali ezihambelana ne-Yen ngokwesiko zichazwe ngeendawo ezimbini zeedesimali, kwaye iipips ze-forex zepasile zilawulwa yindawo yesibini yedesimali. Ke, makhe sibone indlela yokubala iipips nge-USD / JPY.
Ukuba uthengisa enye ye-USD / JPY, ukutshintsha kwepayipi enye ngexabiso kuyakubiza i-1,000 XNUMX Yens. Makhe sijonge umzekelo ukuze siqonde.
Masithi uyathengisa isibini se-USD / JPY ngexabiso le 112.600. Kuninzi kakhulu I-USD / JPY yi-100,000 yeedola zaseMelika. Ke ngoko, uthengisa nge-2 x 100,000 yeedola zaseMelika = 200,000 iidola zaseMelika ukuthenga 2 x 100,000 x 112.600 = 22,520,000 yaseJapan.
Ixabiso lihamba ngokuchasene nawe, kwaye uthatha isigqibo sokuba nciphisa ilahleko yakho. Uvala nge-113.000. Ipayipi enye ye-USD / JPY yintshukumo kwindawo yesibini yedesimali. Ixabiso lihambile 0.40 ngokuchasene nawe, eyi 40 pips.
Uvale isikhundla sakho ngokuthenga ezimbini ze-USD / JPY nge-113.000. Ukukhulula i-200,000 yeedola ngeli nqanaba, udinga i-2 x 100,000 x 113.000 = 22,600,000 yeJen yaseJapan.
Le yi-100,000 Yen engaphezulu kokuthengisa kwakho kweeDollars, ngoko ke unesilela kwi-100,000 yeYen.
Ukuphulukana ne-100,000 ye-Yen kwii-pips ezingama-40 kuthetha ukuba ulahlekelwe ngama-80,000 / 40 = 2,000 Yen kwipay nganye. Oko uthengise amaqashiso amabini, eli xabiso liipesenti ezili-1000 kwiYen nganye
Ukuba i-akhawunti yakho iphinda yagcwaliswa ngemali engeyiyo ikowuti, iyakuchaphazela ixabiso lepay. Ungasebenzisa nayiphi na isixhobo sokubala ixabiso kwi-intanethi ukukhangela ngokukhawuleza amanani axabisekileyo embhobho.
Ungazisebenzisa njani iipips kurhwebo lweMali yamanye amazwe?
Abanye bathi igama elithi "pips" ngokwenyani lithetha "Ipesenti yeNyathelo"Le nto isenokuba yimeko ye-etymology ebubuxoki. Abanye bathi yindawo yeNtengo yeXabiso.
Yintoni ipipi kwi-forex? Nokuba ithini imvelaphi yeli gama, iipips zivumela abathengisi bemali ukuba bathethe ngotshintsho oluncinci kumanani otshintshiselwano. Oku kufana nendlela isihlobo sayo esikumgangatho osisiseko (okanye i-bip) esenza kube lula ukuxoxa ngotshintsho oluncinci kumanani wenzala. Kulula kakhulu ukuthi intambo inyuke, umzekelo, ngamanqaku angama-50, kunokuthetha ukuba inyuke nge-0.0050.
Makhe sibone ukuba amaxabiso e-forex avela njani MetaTrader Ukwenza umzekelo wepayipi kwi-forex kwakhona. Inani elingezantsi libonisa isikrini soku-oda se-AUD / i-USD kwiMetaTrader:
Isicatshulwa esiboniswe kumfanekiso 0.69594 / 0.69608. Siyabona ukuba iinombolo zendawo yokugqibela ayincinci kunamanye amanani. Oku kubonisa ukuba la ngamaqhekeza ebhobho. Umehluko phakathi kwexabiso lokubhalwa kwexabiso kunye nexabiso lonikelo yi-1.4 pips. Ukuba uthenge ngokukhawuleza kwaye uthengise ngeli xabiso, iindleko zekontraktha ziya kuba yi-1.8.
Umahluko phakathi kweepips kunye namanqaku
Ukuba ujonga kwi skrini engezantsi kwenye iwindows, "Guqula iOdolo"festile:
Qaphela ukuba kwinxalenye ye Guqula iOdolo iwindow, kukho imenyu yokudonsa esekuvumela ukuba ukhethe inani elithile lamanqaku njengokuyekelela ilahleko okanye uthathe inzuzo. Ke ngoko kukho i Umahluko obalulekileyo phakathi kwamanqaku kunye nepips. Amanqaku akolu luhlu olusezantsi abhekisa kwindawo yesihlanu. Ngamanye amagama, iipips eziqhekekileyo ezenza isinye kwishumi sexabiso lepay. Ukuba ukhetha Amanqaku angama-50 apha, uya kuba Ukukhetha iipisi ezi-5.
Eyona ndlela yokuziqhelanisa neepips kumaxabiso e-forex kukuba Sebenzisa iakhawunti yeedemo kwi Iqonga leMetaTrader. Oku kukuvumela ukuba ujonge kwaye urhwebe ngamaxabiso entengiso nangomngcipheko we-zero, kuba usebenzisa kuphela imali ebonakalayo kwiakhawunti yeedemo.
Ukuba unomdla ekuthengiseni amasheya, unokuba uzibuza ukuba ngaba ikhona na into efana nepayip kwiintengiso zesitokhwe. Ewe akukho kusetyenzwa kweepips xa kuziwa kuthengiso lwesitokhwe, njengoko sele kukho iimeko ezihleliweyo zokuguqula utshintsho lwamaxabiso anjengepenti kunye nesenti.
Umzekelo, umfanekiso ongezantsi ubonise iodolo yesitokhwe se-Apple:
Inani elipheleleyo kwinani lesicatshulwa lifanekisela amaxabiso kwiiDola zaseMelika, kwaye amanani asibhozo amela iisenti. Lo mfanekiso ungentla ubonakalisa ukuba iindleko ze Urhwebo ziisenti ezi-8. Oku kulula ukuyiqonda, ke akukho sidingo sokwazisa elinye igama elifana neepips. Nangona ngamanye amaxesha ukuthengisa i-jargon kungabandakanya isigama esiqhelekileyo esifana ne "tick" ukumela intshukumo yexabiso elincinci lamaxabiso alingana nesenti.
The ixabiso lepay kwii-indices nakwezorhwebo zinokwahluka kakhulu. Umzekelo, izivumelwano zeoyile yegolide kunye ne-orenji engaqhelekanga okanye i-DXY isenokungalingani kwimeko yemali okanye ii-CFDs. Ke, kubalulekile ukuba Bala ixabiso lepay Ngaphambi kokuvula urhwebo ngesixhobo esithile.
Ngoku kuya kufuneka uyazi impendulo kumbuzo "yintoni ipayipi kurhwebo lwe-forex?". Ukuqhelana ne yunithi yemilinganiselo yotshintsho kumaxabiso otshintshiselwano linyathelo elibalulekileyo lokuba ngumrhwebi oqeqeshiweyo. Njengomrhwebi, kuya kufuneka uyazi ukuba Ixabiso leepips zibaliwe. Oku kunokukunceda uqonde ubungozi obunokubakho kurhwebo. Ke ngoko, sinethemba lokuba esi sikhokelo sikunike ulwazi olusisiseko lokuqalisa umsebenzi wakho wokurhweba.
Amanqaku afanelekileyo Ungayifunda njani iitshathi ze-Forex Yintoni eyasasazwayo ngoRhwebo lweMali? Funda ngerhwebo ngerhwebo inyathelo ngenyathelo